Guardiola oo albaabka kasoo xirtay kooxaha kale ee Premier League, kadib markii wax laga weydiiyay suurtagalnimada uu ku leylin karo – Gool FM
Guardiola oo albaabka kasoo xirtay kooxaha kale ee Premier League, kadib markii wax laga weydiiyay suurtagalnimada uu ku leylin karo
(Manchester) 25 Okt 2018.Tababare Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in inuusan leylin doonin koox kale ee England ah, sababa la xiriira jaceylka uu ka helay dadka kooxda Manchester City.
Pep Guardiola ayaa wareysi uu dhawaan ku bixiyay BBC waxaa wax loogaga weydiiyay suurtagalnimada uu ku leylin karo koox kalae ee ka dhisan dalka England kadib Sky Blues.
“Waxaan ahaan doonaa Manchester City inta ka dhiman nolosheyda, aniga ahaan macquul ma ahan inaan tababare u noqdo koox kale ee ka ciyaarta horyaalka Premier League, sababa la xiriira jacaylka faraha badan ee aan halkan ka helay”.
Dhinaca kale Guardiola ayaa amaanay dabeecadda iyo muhiimada Johan Cruyff, kaasoo geeriyooday sannadkii 2016-kii.
Macalinka reer Spain ayaa dhinaca kale sheegay in Johan Cruyff uu ka saaciday wax badan ee ku saabsan xirfadiisa kubada cagta hadii ay ahaan lahayd xaga taatikada ahaan iyo farsamo ahaan intaba.
“Cruyff waxa uu ina siiyay sir badan iyo waxyaabo aan cidna arki Karin, sida daawashada kubada cagta ay kaga duwan tahay waxaabaha kale, wuxuu ahaa mid aad u jeclaa kubada cagta, waana sida aabahay oo kale”.
Mourinho oo dhagaha ka furaystay codsi uga yimid taageerayaasha United ka hor kulanka Everton
Shaxda rasmiga ah ee Chelsea vs BATE Borisov